Tuesday May 14, 2019 - 13:09:44 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu weeraray xarunta degmada Wardhiigley, waxaana qaraxan ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Sida aan wararka ku heleyno qaraxa ayaa loo adeegsaday gaari nuuciisa lagu sheegay NOAH oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, gaarigan ayaana la sheegay in uu xoog ku galay xarunta degmada Wardhiigley.
Qaraxa lagu weeraray xarunta degmada Wardhiigley ayaa ahaa mid jugtiisa si weyn looga maqlay magaalada Muqdisho, waxaana goobta qaraxu ka dhacay gaaray oo dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ka qaaday gaadiidka gurmadka dega dega.
Khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxan lagu weeraray xarunta degmada Wardhiigley, waxaa sidoo kale qaraxan uu bur bur xoogan gaarsiiyay xarunta degmada.
Xoghayaha degmada Wardhiigley Cali Aadan Warsame ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay qaraxa.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa xarunta degmada Wardhiigley ka socday raashin qeybin dadka masaakiinta ah, inkastoo maanta xilliga qaraxa uu dhacayay aysan goobta ka socon wax raashin qeybin ah.
Xarunta Degmada Wardhiigley ayaa ku dhow Aqalka Madaxtooyada, waxaa bishii hore xaruntaas booqday Madaxweyne Farmaajo oo kula hadlayay shacabka deegaanka, iyadoo la xusuusto inuu xilligaas inuu hanjabaad u jeediyay dadka rabshadaha wada.
Qaraxan ayaa noqonaya kii ugu xooganaa ee dhaca bisha barakeesan ee Ramadaan, waxaana qaraxan uu imaanayaa xili amaanka magaalada Muqdisho aad loo adkeeyay lana dhigay magaalada ciidamo aad u badan.